FJKM Tangaina Fanantenana Nanatanteraka “Garden party” ho an`ny fanitarana
Nikarakara hetsika “garden party” omaly alatsinain’ny pentekosta, tontolo andro tetsy amin’ny Kianjan`ny masera Fenoarivo ny FJKM Tangaina Fanantenana Ampitatafika.
Hetsika tafiditra amin’ny ezaka fanitarana ny fiangonana nanasana ny rehetra. Nisaotra an`ireo izay nanatrika ilay « garden party » ny mpitandrina Radimbialison Johary Fanomezantsoa sy ny komity mpikarakara tamin'ny fanamarihana maro samihafa mba ahafahan'ny fiangonana mivoatra. Nisy ny tranoheva nahitana ireo kojakoja sy kilalao maro samihafa. Ankoatra izay, nisy lalao maro samihafa toy ny Zumba, ny karaoke, ny kilalao ho an`ny ankizy…Nanafana ny hetsika ireo antoko ao amin`ny FJKM Tangaina Fanantenana sy ny tarika Antson`ny fiderana, izay fanta-daza amin`ny fivoizana ny hira gasy evanjelika. Tsy ny taranaka Tangaina Ampitatafika irery ihany fa ny kristianina rehetra avy eto Antananarivo sy ny manodidina no nasaina ho tonga teny an-toerana satria goavana ny asa fanitarana hataon’ny fiangonana. “Meteza hofenoina ny Fanahy Masina”.